Ny iPhone 13 dia hampiditra ny fenitra vaovao WI-FI 6E | Vaovao IPhone
Raha vantany vao mazava amintsika ny momba ny faran'ny iPhones manaraka amin'ity taona ity ho an'ny ampahany ivelanyNoho ny fivoahan'ny santionany metaly handramana ny fitakon'ny fonony vaovao, tsy maintsy fantarintsika izay zava-baovao hoentin'izy ireo ao anatiny.
Ary ny iray amin'izy ireo dia ilay manaraka angamba iPhone 13 Izy ireo dia hifanaraka amin'ny fenitra fifandraisana 6G 6E WI-FI vaovao. Efa mahalala zavatra iray hafa isika.
Mandeha tsy azo ihodivirana ny fotoana, ary mihena hatrany ny sisa amin'ny famoahana iPhones amin'ity taona ity. Ary na dia tsy tian'i Apple aza izany dia tsikaritr'izy ireo tsikelikely ny sasany amin'ireo zava-baovao izay hampiditra ny iPhone 13 vaovao ho hitantsika ao Septiembre.
DigiTimes vao namoaka a tatitra izay anazavany fa ny iPhones manaraka amin'ity taona ity dia hifanaraka amin'ny fenitra fifandraisana tsy misy tariby vaovao WI-FI 6E.
Kaonty ireo mpamokatra singa Nandresy ny GaAs IC Semiconductors sy orinasa Wireless Wireless Semiconductor, ary Visual Photonics Epitaxy Company dia hampitombo ny taham-pahavitrihany noho ny baikon'ny singa WI-FI 6E ho an'ny Apple iPhones manaraka izay miasa ankehitriny.
Ny Wi-Fi 6E vaovao mahazatra, raha ny marina dia mitovy amin'ny Wi-Fi 6, izay efa nampiditra ny iPhone 11. Ankehitriny ny "E" dia midika hoe "Extended", izay midika fa ilay Wi-Fi 6 mitovy dia nitarina tamin'ny tarika From 6 GHz.
Io dia hahafahan'ny WI-FI 6E hiasa amin'ny tarika matetika matetika manomboka amin'ny 5,925 GHz ka hatramin'ny 7,125 GHz, mamela hatramin'ny 1.200 MHz misy spectrum fanampiny. Izany dia midika hoe manana bandwidth maro kokoa, hafainganam-pandeha haingana ary latency ambany, manome lalana ny fanavaozana ho avy toa ny AR / VR, streaming 8K, sns ”.
Ka ny fitambaran'ny a router mahazatra Miaraka amin'ny WI-Fi 6E sy iray amin'ireo iPhone 13 vaovao dia hahazo fifandraisana tsy misy tariby tena mampitolagaga eo amin'ireo fitaovana roa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fantson'ny IPhone » iPhone 13 » Ny iPhone 13 dia hampiditra ny fenitra WI-FI 6E vaovao
Miaraka amin'ny fonony Elago vaovao ho an'ny Siri Remote dia tsy hahavery azy intsony ianao